Yasmiin's Story - Telling the Real Story
Fursadaha Waxabarasho ee u Furaya Jilisanaanta Cusub ee Qaxootiga
Maymuun iyo Mahamed ayaa iyaga iyo qoysaskooda uga soo qaxay dagaaladii sokeeye ee ka dhacay Soomaaliya iyaga oo caruur ah, waxayna magan u noqdeen dalka Itoobiya. Waxay ahaayeen kuwii ugu horreeyay ee qoysaskooda ah ee helay waxbarasho jaamacadeed.
Itoobiya, mid walba wuxuu helay DAFI Scholarship taas oo u sahashay in ay qaataan shahaadadii jaamacadeed.
Waxay hadda ka mid yihiin Soomaalidii ugu horreysay ee qaxootiga ku ah Itoobiya ee qaabilaadda University Corridors Programme (UNICORE) scholarship, taas oo u oggolaan doonta inay ku sii wataan barnaamijyada shahaadada mastarka ee Jaamacadda Florence.
Deeqda waxbarasho ee UNICORE, oo ay dallacsiiyeen 24 jaamacadood oo Talyaani ah oo taageero ka helaya UNHCR, Hay'adda Qaxootiga Qaramada Midoobay, Wasaaradda Arrimaha Dibadda ee Talyaaniga iyo la-hawlgalayaasha kale, ayaa siinaysa fursad naadir ah. Inkasta oo ay jiraan tiro deeqo waxbarasho ah oo loo hayo qaxootiga, aad u yar ayaa dhab ahaantii la heli karaa. Qaxooti badan, iyagoo aan waxba haysan, ayaa ka maqan dukumeenti, sida baasaboorada iyo sidoo kale diiwaanka akadeemiyadeed ee dalalkooda oo leh turjumaad rasmi ah.
Maanta, kaliya kala badh carruurta qaxootiga ah ee Itoobiya ayaa heli kara dugsiga hoose. Kaliya 13 boqolkiiba carruurta qaxootiga ah ayaa dhigta dugsiga sare. Kaliya shan boqolkiiba qaxootiga ayaa heli kara waxbarasho sare, taasoo aad uga hooseysa celceliska caalamiga ah ee qaxootiga aan ahayn 39 boqolkiiba. UNHCR iyo la-hawlgalayaasheeda waxaa ka go'an inay tan beddelaan oo ay hubiyaan taas 15 per cent of refugees have access to higher education by 2030.
Maymuun, oo wada shahaadada Master-ka ee Juqraafiga, ayaa rajaynaysa in loo arko inay tahay tusaale ku dayasho mudan bulshadeeda iyadoo muujisay saamaynta ay waxbarashadu ku leedahay hablaha iyo saamaynta togan ee waxbarashadu u soo kordhin karto bulshada.
"Waxa aan rabo in badan waa in aan beddelo sida loo arko waxbarashada gabdhaha," ayay tiri Maymuun. "Waxaan rabaa in dadku fahmaan muhiimadda ay leedahay."
Waxbarashadu waa mid u furan haweenka iyo gabdhaha qaxootiga ah, taasoo u sahlaysa inay noloshooda iyo mustaqbalkooda gacanta ku dhigaan oo ay si siman uga qayb qaataan bulshada. Sida laga soo xigtay Sanduuqa Malala, gabdhaha qaata waxbarashada waxay u badan tahay inay helaan qoysas caafimaad qaba waxayna ka qaybqaataan dhisidda bulshooyin adkeysi leh oo xasilloon.
Markii Maymuun ay sugaysay inay hesho shahaadadeeda COVID ee dhijitaalka ah ee EU, waxay isku aragtay inay ku go'doonsan tahay toddobaadyadii ugu horreeyay Talyaaniga markii uu cudurku ku dhacay. Ma aadi karto fasalka mana booqan karto meel kasta oo gudaha ah oo dadweyne ilaa ay ka hesho kaarka cagaaran. Waxay baratay Talyaani.
"Halkan waxaa muhiim ah inaad taqaanid luqadda Talyaaniga, mana aqaano luqadda sidaas darteed aad bay u adag tahay inaad saaxiibo samaysato." Maymuun ayay tidhi.
Mahamed waxaa laga aqbalay barnaamijka shahaadada mastarka ee xiriirka caalamiga ah ee labada jaamacadood ee Florence iyo Palermo. Baadhitaanno iyo wada-hadallo uu la yeeshay ardaydii uu ku bartay labada jaamacadood, waxa uu doortay Jaamacadda Florence.
Waxa uu ka walwalay in ay ku adkaato la qabsiga wadan cusub.
"Haddii aan runta sheego, weligay uma malaynayn inay ii fududaan karto inaan imaado Florence," Mahamed ayaa yidhi. "Waxaan ogaaday in qaar badan oo ka mid ah rajadayda iyo riyooyinkeyga ay dhowaan run noqon karaan."
"Tallaabadii ugu horeysay ee aan ku qaatay riyadeyda waxay ahayd inaan raadiyo albaabka," ayuu yiri Mahamed "Markaad halkan joogto, waxaad dhihi kartaa waxaad gacantaada ku haysaa mustaqbal wanaagsan."
Toddobo walaalo ah oo uu ugu weyn yahay, Mahamed waxa uu dareemaya mas’uuliyadda walaalihiis iyo qoyskiisa, qoyskiisuna waxa ay tani u arkaan fursad wax ka beddeli karta noloshooda.
Asalkiis, oo markii hore shaki ka qabay sharcinimada barnaamijyada deeqaha waxbarasho, ayaa dhiirigeliyay isaga. Tan iyo markii uu dhoofay, waxa uu codsiyo badan ka helay saaxiibada Itoobiya oo waydiisanaya xidhiidho deeq waxbarasho si ay iyaguna u sii wataan waxbarashadooda. Intaa waxaa dheer, Soomaalidii walaalaha ahayd ee si aan caadi ahayn ku tagay Talyaaniga, isaga ayaa ku dhiiraday oo la yaabay markii ay ogaadeen in ay jiraan waddooyin sharci ah oo lagu tago Yurub
Mahamed iyo Maymuun labaduba waxa ay rajaynayaan in ay noqdaan kuwo isbedel sameeya oo ay fursad u helaan in ay maalin uun gacan ka geystaan ​​dib u dhiska Soomaaliya.
"Haddii xaaladda Soomaaliya ay soo roonaato, markaas waxaan jeclaan lahaa inaan ku laabto waddankeyga," ayay tiri Maymuun.
In nolosha lagu beddelo fursado waxbarasho
Laba arday oo qaxooti ah oo ku sugan magaalada jigjiga, itoobiya, fursada deeqda waxbarasho ayaa ku saabsan inay noloshooda wax ka bedesho. Waxkasta oo khilaafsan, iyo taageerada qoysaskooda iyo bulshadooda, waxay haystaan ​​fursad ay ku galaan safar cusub oo wax ka beddelaya noloshooda iyo bulshadooda.